Isitudiyo seSerene kwiNdawo yokuchithelwa kweholide yeSitayile seVillas Complex - I-Airbnb
Isitudiyo seSerene kwiNdawo yokuchithelwa kweholide yeSitayile seVillas Complex
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguJames & Tia
Ziphumze kwesi situdiyo sikwindawo egqibeleleyo, enendawo yomlilo ebekwe ecaleni komthombo omhle wepaseo oluhlaza kunye nokuhamba ngemizuzwana engama-90 ukuya echibini elikhulu kunye nejim. Ababuki zindwendwe ngabanikazi behotele (kubandakanya ukuba yi-GM yeehotele ezi-5 zodidi oluphezulu ze-Starwood), kwaye bayilungise le villa njengeHOTEL ENGAMILEYO kuquka neFrette duvet & neshawari yemvula! Gcoba ikomityi yekofu yeKeurig kusasa kwaye ujikeleze amabala amahle kumazantsi eentaba zaseSanta Rosa okanye uthathe uhambo olufutshane ukuya eWaldorf Astoria La Quinta Resort ecaleni kweendawo zokutyela ezintle. Umabonakude uxhotyiswe ngeRoku/Netflix/Hulu/Prime.
Ziphumze kwesi situdiyo sikwindawo egqibeleleyo, enendawo yomlilo ebekwe ecaleni komthombo omhle wepaseo oluhlaza kunye nokuhamba ngemizuzwana engama-90 ukuya echibini elikhulu kunye nejim. Ababuki zindwendwe ngabanikazi behotele (kubandakanya ukuba yi-GM yeehotele ezi-5 zodidi oluphezulu ze-Starwood), kwaye bayilungise le villa njengeHOTEL ENGAMILEYO kuquka neFrette duvet & neshawari yemvula! Gcoba ikomityi yekofu y…
“Impahla enemigangatho ephezulu, ibhafu yokufunxa eyahlukileyo kunye neshawari, kunye nendawo yale villa ayinakubethwa.”
- James & Tia, umbuki zindwendwe wakho
I-Amazon Echo, Ibhedi/ikhothi yomntwana esongwayo xa useluhambeni, I-Cable TV, Ifeni esesilingini, Ifriji encinci, Igumbi lokuhlambela elisegumbini lokulala, Ikhitshi elincinci, I-King bed, Indawo yomlilo engaphakathi endlini, I-Terrace, Izinto ezifakwa efestileni zokwenza indlu ibe mnyama, Ukubona iintaba, Umatrasi omamfu-mamfu, Umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, Umatshini wokudlala ii-DVD
Ibhafu enamanzi ashushu esetyenziswa nangabanye, I-Hammock, Iindawo zokuhlala eziphandle, Indawo yokubasa, Indawo yokupaka ngaphakathi esimahala, Ipuli esetyenziswa nangabanye, Izitulo zokugcakamela ilanga, Izixhobo zokujima
Ikhamera oyibeka ukuze ujonge usana
4.90 (iingxelo zokuhlola 106)
Ifakwe kumqolomba weeNtaba zaseSanta Rosa, le ndlu ibekwe eLa Quinta ngaphakathi kwendawo yokuphumla ebonelela ngokufikelela kumachibi ekwabelwana ngawo, iibhabhu ezishushu, kunye neziko lokomelela. Indawo yokutyela, ukuthenga, kunye negalufa kukuhamba nje okufutshane.
Umgama ukusuka ePalm Springs International Airport
imizuzu eyi-37 ngemoto xa indlela ingaxakekanga
Umbuki zindwendwe ngu- James & Tia
UJames & Tia yi-Superhost
Inombolo yomthetho: 065492